Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga : Nanafatra fitaovam-piadiana -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga : Nanafatra fitaovam-piadiana
Fampidirana basy sy fitaovam-piadiana ary fanamiana miaramila tsy fanta-piaviana. Ireo no heloka efa miandry sahady an’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, ankoatra ny raharaha any Frantsa.
Nanenjana manoloana ireny fitaovam-piadiana sy fanamiana miaramila tsy fanta-piaviana naderadera teny amin’ny CCI Ivato ireny, ny fitondrana nandritra ny filankevitry ny minisitra notarihin’ny filoha mpisolo toerana, Rivo Rakotovao. Misy lalàna mifehy tokoa mantsy ity resaka fitaovam-piadiana sy fanamiana miaramila ity, ka voatery nangata-panazavana momba izany ny fitondram-panjakana.
Tsy nahafaly ireo minisitra MAPAR anefa izany fanarahan-dalàna mikasika ny fampidirana basy sy fitaovam-piadiana izany, ka dia nirintona nanakatom-baravarana nivoaka ny efitrano fivoriana i Pierre Houlder, minisitry ny Asam-panjakana. Izay mihitsy ilay antsoina hoe MAPAR sy TGV, olona mihevitra hitondra fanjakana ve dia handika tsotra izao ny lalàna velona eto amin’ny tany sy fanjakana! Inona izany izao no maha samihafa an’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga amin’ireo mafia mpanao trafika-na basy?
Voaporofo izao fa tsy misy ilàna azy mihitsy ity praiminisitra Ntsay Christian ity. Efa hita izao fa loza mitatao ho an’ny firenena izany fanafarana fitaovam-piadiana tsy fanta-piaviana izany, miampy ny fahatrarana ireo mpanao kidnapping, izay tsy iza fa olon’ny MAPAR, kanefa dia tsy misy fandraisana andraikitra hatramin’ny androany. Mahazo manafatra izay fitaovam-piadiana mety aminy avokoa ve izany ny olon-drehetra?